SELC English – Level Test Exam – Edu Myanmar | Online Classes | Center Classes
SELC English - Level Test Exam
5(2သင်တန်းမန့်များ )
S.E.L.C Standard English Language Centre
Sayar U Ye ThitPrinciple of SELC
S.E.L.C English သင်တန်းတွင် General Four Skills သင်တန်းတက်ရောက်လိုသူတွေအနေနှင့် မိမိတက်ရောက်သင့်တဲ့ သင်တန်းအမျိုးအစားကို သိရှိနိုင်ဖို့ Placement test ဖြေဆိုသင့်ပါတယ်။ ဒီ placement test ကို General Four Skills သင်တန်းတက်လိုတဲ့ ကျောင်းသား ကျောင်းသူတွေအတွက် ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။
grammar နှင့် usage အဓိကစစ်ဆေးတာပါ။
မိနှစ် ၃ဝ အချိန်ပေးပြီးဖြေပါ။
ဖြေဆိုနိုင်မှုပေါ်မူတည်ပြီး Level 1 Level2Level3အဖြေထုတ်ပေးပါမယ်။
Level စစ်ဆေးခြင်း 00:30:00
Yü Ÿu Ÿã Ÿâစက်တင်ဘာ 8, 2017 at 10:11 မနက်ပြန်စာရေးရန် အသင်းဝင် အဖြစ်ဝင်ရောက်ပါ။
ဆရာရဲ ့Placement test ဖြေရတာအဆင်ပြေပါတယ်ရှင့် 😀
65မှာ40 နဲ ့Level2တက်ပါလို ့အဖြေရပါတယ်……ကျေးဇူးပါရှင့်
Khant Khant Ne Winnစက်တင်ဘာ 12, 2017 at 8:21 မနက်ပြန်စာရေးရန် အသင်းဝင် အဖြစ်ဝင်ရောက်ပါ။
မေးခွန်းတွေ အရမ်းကောင်းပါတယ်ရှင့်။တစ်ချို့အဖြေတွေကို မသိတာတွေရှိတော့ ဘာကြောင့်အဲ့ဒီအဖြေထည့်ရလဲဆိုတဲ့ အကြောင်းရင်းနဲ့ အဖြေမှန်လေးတွေကို ဖြေပြီးရင်ကြည့်လို့ရအောင် ထည့်ထားပေးစေချင်ပါတယ်ရှင့်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Khant Khant Ne Winnစက်တင်ဘာ 14, 2017 at 5:36 မနက်ပြန်စာရေးရန် အသင်းဝင် အဖြစ်ဝင်ရောက်ပါ။
Khant Khant Ne Winnစက်တင်ဘာ 14, 2017 at 6:02 မနက်ပြန်စာရေးရန် အသင်းဝင် အဖြစ်ဝင်ရောက်ပါ။
Thanks for test?
Khant Khant Ne Winnစက်တင်ဘာ 14, 2017 at 6:09 မနက်ပြန်စာရေးရန် အသင်းဝင် အဖြစ်ဝင်ရောက်ပါ။
Mu Muစက်တင်ဘာ 23, 2017 at 8:10 မနက်
Mu Muစက်တင်ဘာ 18, 2017 at 3:10 ညနေပြန်စာရေးရန် အသင်းဝင် အဖြစ်ဝင်ရောက်ပါ။
Zaw Thu Aungစက်တင်ဘာ 27, 2017 at 5:11 ညနေပြန်စာရေးရန် အသင်းဝင် အဖြစ်ဝင်ရောက်ပါ။
I agreed it from the bottom of my heart……………………….
SELC English - Level (III)
20,000 Ks 10,000 Ks
SELC English - Level (II)